Sababiin Dhumaatii Daangaa: “Wanti karaa Benishangul Gumuz kana nu jeeqaa jiru iccitii guddaan kunooti. – Kichuu
Sababiin Dhumaatii Daangaa: “Wanti karaa Benishangul Gumuz kana nu jeeqaa jiru iccitii guddaan kunooti.
Wayyaaneen bara turtii isheetii daangaa Tigiraayii hanga Gambeellaa fi BG walitt baaftee dachee oromiyaa dhiphisuu fi akka daangaan oromiyaa biyya Sudaan waliin wal hin quunnamneef dallaa warra gurraachotaan lafti kun keessan jechuun dachee Oromiyaa karaa lixaa onoota Begii fi Gidaamii hanga Danbidoolloo tuquu ka’utti kaartaa isaa warra BG fi Gambeellaaf laattee jirti.
Dhimma kana immo ABO fi WBOn akka dubbii isa dhumaatti ilaala.
Har’as dhiigaa fi lafeesaa aarsaa godhee waardiyyaa dhaabbachaa jira.
Egaa nuti waan beekuu qabnuu fi bulchiinsi BG sun maal irraa ka’ee WBO balaaleffatee? Jennee yoo yaadne duuba dubbii isaatii waatu jira.
Akka karoora wayyaanotaa fi warreen gurraachaa kanatti daandiin ASOOSAA fi GAMBEELLAA walitti baasu Begii qaxxaamuree #Gidaamii fi Muggii keessa fula’ee Gambeellaatti kutu sanaa gaditti harka jala galfachuuf ture.
Jijjiiramni siyaasaa dhufe fi addatti immoo jabaatee mul’achuu WBO naannoo kanaa kaayyoo jara kanaatti gufuu ta’uu hubatanii ijibbaata wixxifachaa jiru.
Egaa mootummaanis ta’e uummatni oromoo marti dhimma kana goolaba itti gochuuf gaaffii #BOORDERII dirree dhiyaa oromiyaa biyya ollaa #SUDAANwaliin wal quunnamsiisu nuuf ba’uu qaba kan jedhu kaasuu qaba.
Yeroo kana dhimmi daangaa oromiyaa karaa tixaa kun adda ba’uu danda’a.
Rakkoo diinagdee gara lixaa ta’ee kan jiru boorderiin Sudaan waliin walitti nu baasu hanga hojjetamutti rakkoon diinagdee uummatichaa furamuu hin danda’u. Akka nuti biyya ollaan wal hin quunnamneef dallaa nutti ijaaramee ture of irraa cabsuunis yeroon isaa amma.”